MACLUUMAADKA WOLFDOG IYO SAWIRRO - EEYAHA
Macluumaadka Wolfdog iyo Sawirro
Ey / Guri ey ey iskujira
'Kabtan waa wolfdog heer sare ah. Isagu waa mid xiiso leh laakiin aad u cabsi badan / xishood badan kaas oo aad ugu badan wolfdogs-ka dhabta ah ee dhabta ah. Sida kuwa kale ee HC ma sameeyo xayawaan guri joogta ah oo wanaagsan awgood burbur. Helitaanka nuxur sare si looga aqbalo gudaha gudaha waxay qaadataa waqti dheer mana aha wax aad u badan. 3-da sawir ee ugu horeysa waa Kabtan qiyaastii 8 bilood jir ah oo jiilaalka jiilaalka ka hor daaqadiisa koowaad. Labada labaad waa Kabtan ka dib markii uu daadihiisii ​​ugu horreeyay ee 1 sano jir. Waxyaabaha aadka u sarreeya ee loo yaqaan 'wolfdogs' waxay dhashaan keliya xilliga gu'ga maadaama ay leeyihiin hal wareeg oo kuleyl ah sanadkiiba. Badanaa waxyaabaha bartamaha ku jira waxay leeyihiin hal wareeg sanadkii sidoo kale. '
Wolfdog Mareykan ah
Wolfdogs waxaa si ka wanaagsan loogu tilmaami karaa wehel ahaan xayawaanka rabaayadda ah. Waxay ka caqli badan yihiin eyda 'guryaha' badankood, way is ogyihiin, ka warqabaan hareerahooda, waxay xitaa kula tartami doonaan xitaa daryeelayaasha khibrada leh madax adeygooda iyo 'waxa aniga igu jira' aragtida, iyo guud ahaan waa canine-ka ugu saadaalinta badan yeeydu waa tusaalaha loogu talagalay dabeecadaha hareeraha iyo yeeyda waxay u muuqdaan inay si fiican u muujiyaan shucuurta.
Qaabka guud ee waxyaabaha yeydu ka kooban tahay waa 1-49% waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin a Content Low (LC), 50-74% waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin Mid Content (MC), iyo 75% + waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin Mawduuc Sare (HC) Mawduuc Sare Astaamaha eyga 1-3 laakiin haddii kale waa inay noqdaan wax aan laga sooci karin yeyda saafi ah.
Dabcan waxaa jira hoosaadyo kala-saarid caadi ah oo is-dulsaaran sida Mawduuc Hoose, Sare Sare, Mid Dhexe, Mid Dhexdhexaad ah, Sare Dhexe, Sare Sare, Mawduuc Sare, iyo Waxyaabaha Wolf ayaa loo isticmaalaa in lagu sharxo xayawaanka. Ereyadani guud ahaan waxaa loo adeegsadaa samatabbixinta marka nooc aan sax ahayn la garanayn. Genotype waa nooc xayawaan ah% ku saleysan nasab VERIFIABLE. Abtirsiinta la xaqiijin karo maahan waraaqaha CKC maadaama xayawaan kasta si fudud looga diiwaan gelin karo CKC isla markaana CKC aysan hubin boqolkiiba. Dad badan oo bilaa damiir laawayaal ah ayaa isticmaali doona waraaqaha CKC iyagoo isku dayaya inay hubiyaan khadadka xayawaanadooda.
Phenotyping waa hab lagu caawiyo go'aaminta waxyaabaha yey ee xayawaannada leh nasab aan la caddeyn karin ama ka caawin kara go'aaminta haddii soo-saaraha uu si qaldan u sheegayo xoolahooda (sida ugu yeerista waxyaabaha / waxyaabaha hooseeya ee sare). Waxyaabaha sarreeya waligood uma eegi doonaan oo uma dhaqmi doonaan sida eey oo kale, waa wax aan macquul ahayn. Waxyaabaha udub dhexaadka u ah waxay yeelan doonaan tiro xitaa xoogaa ka sii badan oo yey ka badan dabeecadaha eyga. Waxyaabaha hooseeya waxay yeelan doonaan astaamo yey ka yar dabeecadaha eyga.
Liiska hubinta, astaamaha yeeyda ee xayawaanku leeyahay ayaa ka sarreeya waxyaalaha ay ka kooban yihiin. Si kastaba ha noqotee xusuusnow in astaamo yar aysan macnaheedu ahayn yey ka kooban sida eeyaha iyo yeeydu ay wadaagaan dhowr astaamo oo la mid ah waana qaddar isdaba-joog ah oo sifooyin ah oo awood u leh in lagu go'aamiyo nuxurka yeyda iyada oo loo marayo ficil-celinta.
Dadka qaangaarka ah: Laabta Cidhiidhiga ah (lugaha hore waa inay taabtaan ama xitaa taabtaan markay taagan yihiin), Cagaha Weyn, Suulasha Webka, Mudal dheer, Joogsi la'aan (farqiga u dhexeeya foodda iyo muuska, waa inuu noqdaa mid tartiib tartiib ah), Ciddiyaha Madow ama Taupe (marna ma cadda ), V-Cape, dhogorta dhexda (dhogorta kaliya ee dhogorta waa inay ahaataa midabbo badan), Tail Toosan, Tail Bristled, Tail Madoow oo Taabasho ah (marka laga reebo astaamaha), Cagaha hore ayaa waxyar u rogaya, Cow Hocked, Lanky (lugaha dhaadheer), Slanted Indhaha, Indhaha Madoobaaday Madoow, Sanka Madoow, Bushimaha Madoow, Midabka Indhaha (Jaale, Cawl, Cagaar, Cagaar, Cambaar) buluug aad bey u yartahay waxyaabaha ku jira, Khariidad isku dhafan, maaskaro isku dhafan, Dhagaha Yar, Dhagaha Wareegsan, Dhagaha Fiican casaan muujinaya), Single Track
Dhalashada / Dhallaanka:
Wuxuu ku dhashay bunni madow / madow iyo wajiga midabkooda waqti kadib (waxyaabaha qaar ee sarsare qaarkood waxaa laga yaabaa in mid ama labo ay ku yeeshaan qashin ku dhashay cad oo leh taranka xariiqda, taranka, cillad hidde ah, iwm.), Ma laha Calaamado Caan ah dhalashada (waa inay ahaataa mid adag midab leh leexasho yar), Dhagaha waa inay kacaan oo ay joogi karaan 3 toddobaad.
Waxay kuxirantahay yey dabeecadda dabeecaddu aad bay u kala duwanaan kartaa. Shakhsiyadda yeeyda iyo shakhsiyadda eyda gudaha waa in la tixgeliyaa haddii aad xiiseyneyso yeey.
Dabeecadda Mawduuca Sare: Wolfdog ka kooban waxyaabo badan ayaa u muuqda inay la wadaagaan inta badan shakhsiyadda iyo astaamaha muuqaalka sida yeeyda. Maaddaama noocyada sare ee yeydu badanaa cabsi badan yihiin, doorbidayaan inay ka dhuuntaan qof kasta oo shisheeye ah, MA AHA ilaalin, waxaa laga yaabaa inaad hesho mid ama laba digniin qaylo-dhaan / buuq / guux si aad u ogeysiiso inuu jiro qof shisheeye ah oo jooga ka hor intaanay xooluhu dib u noqon.
Maareynta maalinlaha ah ee bilawga 10 maalmood ee qoyska tooska ah waa muhiim xusuusnow ciyaalku (yeeyda, wolfdog, iyo eeyga labadaba) inay aad ugu nugul yihiin cudurkan xilligan iyo isdhexgalka dadka ka baxsan qoyska waxay keeni karaan khatar caafimaad. Gacan-yarayaasha bani'aadamku waa inay bilaabaan xiriirka goor hore, la doorbidayo inta u dhexeysa 10-14 maalmood ee dhalashada cunugga. Cilmi-baaris ayaa muujisay in haddii ardayga aan wax laga qaban muddada isku xirnaanta muhiimka ah ee 21-ka maalmood ee ugu horreeya, ay ku jawaabi karto dabeecad aad u cabsi badan oo ku wajahan dadka iyo maxaabiista. Wax ka qabashada waa inay sii socotaa si looga hortago dib u dhac ku yimaada bulshada.
Muddada labaad ee isku xidhka muhiimka ahi waxay dhacdaa toddobaadyada 6-8.
Inta udhaxeysa lix ilaa siddeed toddobaad, ardayga rabitaankiisa inuu soo dhowaado lana xiriiro shisheeyaha ayaa ka culus taxaddarkiisa dabiiciga ah. Waqtigaan waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay xilliga ugu habboon ee lagu soo bandhigi karo arday gurigiisa cusub iyo hareeraheeda. Daraasadaha cusub, si kastaba ha noqotee, waxay soo jeedinayaan waqti gaaban - 7 ½ ilaa 8 toddobaad (Serpell & Jagoe, 1999 Slabbert & Rassa, 1993 iyo Fox iyo Stelzner, 1966).
Inta lagu jiro wejigan, ardayga waa in si tartiib tartiib ah loogu soo bandhigaa kicinta cabsi abuurka leh sida carruurta, boostada, nadiifiyeyaasha faakiyuumka, daasadaha buufinta, sawaxanka waddooyinka, sawaxanka weyn, iwm. Inta u dhexeysa siddeed illaa iyo laba iyo toban toddobaad, ardayga waa in sidoo kale la baraa meelaha, duruufaha, iyo xaaladaha ay u badan tahay inuu la kulmo markuu weynaado. Kaliya ardayda iskuulada kuma xirna dadka inta lagu jiro marxaladan xasaasiga ah, laakiin sidoo kale meelaha. ”
Waxyaalaha sarreeya waa kuwo aad u caqli badan waxayna tijaabin doonaan xakameyntaada. Ilaa iyo intaad ka haysato aqal lixaad leh oo ah dhammaan 4-ta dhinac ee caadiga ah ee xayndaabka oo lagu daray kor iyo hoosba oo ka samaysan silsilad culus ama silsilado lo 'ma jiraan wax la yidhaa caddayn bam (xitaa markaa markaa yeydu waxay heli kartaa meel daciif ah sida sidii meel miridhmay ama dhaawacmay).
Qeybta ugu badan ee leh waxyaabo sare, ma jiraan wax la yiraahdo 'eeyga guriga'. In kasta oo ay jiraan dad ku guulaystay in ay keenaan waxyaalo dhaadheer guriga ma aha wax iska caadi ah oo badiyaa kama tagi karaan xayawaanka iyaga oo aan ilaalin. Tani waa sababta oo ah ereyga xayawaanku 'kugu cuno guriga gudihiisa iyo gurigiisa' ayaa soo gala ciyaarta. Xaaladdan oo kale kama hadlayno cuntada. Ma aha wax aan caadi ahayn in nuxur sare ay calaacalaan alaabta gurigaaga, calaliso darbiga gurigaaga qallalan, fiilooyinka calaliyo, albaabbada calaliyo, calaalinta banaanka guriga, wax alla wixii ay ku heli karaan afkooda. Dabeecadaha kale ee aan la aqbali karin ee badanaa lagu arko waxyaabaha sare leh ayaa ku boodaya miisaska, qalabka guryaha, iyo mararka qaarkood xitaa dusha sare ee firinjeerada.
timo dhaadheer dachshund pomeranian
Waxyaabaha aadka u sarreeya ee yeydu waa kuwa ugu yar ee doonaya inay kaa farxiyaan. In kasta oo ay aad u jecel yihiin haddana uma badna in ay khiyaamo sameeyaan, fadhiistaan ​​markii la weydiisto, joogitaan, rogaalcelin, iwm ... haddii aysan jirin ganacsi u qalma waqtigooda (yacni cuntada / daweynta) iyo xitaa markaa taasi ma shaqeyn karto.
Sababta oo ah ugaadhsiga sare ee carruurta yaryar, bisadaha, ama eeyaha yaryar WALIGEED looma daayo yeydo dhererkiisu sarreeyo. Ilmaha ku ordaya agagaarka qaylinaya waxay u badan tahay inuu codsado jawaab ugaadhsiga ugaadhsiga sare wuxuuna u horseedi karaa dhaawac ama xitaa dhimasho. Fadlan la soco in tani kaliya aysan ahayn astaamo yeey, noocyada kale eeyaha (gaar ahaan kuwa waqooyiga) waxay u muuqdaan inay sidoo kale wataan ugaarsi sare. Xitaa iyadoo lala dhaqmayo hore bisadaha ama eeyaha yar yar waa in nuxurkiisu sarreeyo runti aan waligood keligood looga tegin midkoodna.
Mid Mawduucyada Dabeecadda: Mawduucyada Dhexe waxay u muuqdaan kuwo ka bulsheed badan Mawduucyada Sare. Waqti ayey qaadan karaan si ay ula kululaadaan shisheeyaha oo ay aad u baqdaan marka hore laakiin sabirka waxay u muuqdaan inay si dhakhso leh u aaminaan. Waxyaalaha bartamihiisu liidato ee bulshada ayaa u badan inay noqdaan 'bahal' marka loo eego nuxurka sare ee isla la dhaqanka bulshada. Iyada oo waxyaabaha ku dhex jira taranka wanaagsan ay noqon karaan kuwo baxa ayaa laakiin qaar badani waxay hayan doonaan nooc ka mid ah xishoodka dadka shisheeyaha ah. Waxyaabaha ku jira bartanka badiyaa waa la soo gelin karaa guriga in kasta oo calaliintu ay dhibaato noqon karto, waxay u muuqdaan kuwo doonaya inay ka farxiyaan waxyaabo ka sarreeya.
Mids guud ahaan way ka fiican yihiin xayawaanka yaryar marka loo eego waxyaabaha ku jira laakiin inta badan marar badan ayaa loo yaqaan 'wolfdogs' oo lagu qaso noocyada Waqooyiga, GSDs, Xuduudaha Collies, ama noocyada kale ee leh ugaarsiga aadka u sareeya ee milkiile kasta waa inuu taxaddar yeeshaa markay ku dhow yihiin carruurta yaryar, bisadaha, ama yar eeyaha. Waxyaabaha ku jira bartamaha sidoo kale waxay noqon karaan kuwo wax dumiya.
Mawduuc hoose: Dabeecad yar ayaa ah xulashada ugu fiican ee qof ku cusub yeeyda. Iyagu badiyaa waa kuwa ugu shucuurta badan, diyaar u ah inay ka farxiyaan oo ugu fiican guriga iyaga oo inta badan ilaaliya garaadka iyo ka warqabidda nuxurka sare. Waxyaabaha hooseeya way fududahay in la tababaro inkasta oo ay mararka qaarkood madax adag yihiin. Waxyaabaha hooseeya ayaa sidoo kale u badan inay sifiican ugu fiicnaadaan carruurta, bisadaha, iyo eeyaha yaryar. Si kastaba ha noqotee bisaduhu wali waxay u muuqdaan inay yihiin wax la ugaadhsado Bulsheynta hore waxay kaa caawin kartaa baabi'inta khataraha badankood.
Sidoo kale xusuusnow in taranka aan tixgelin siinin dabeecadda ay ka dhalan karto xayawaan aan xasillooneyn (kuwa dhaqda qaarkood ayaa lagu yaqaanaa inay leeyihiin yeydo dagaal leh ama yeeyda leh arrimaha dhaqanka). Tani maahan inay sabab u tahay 'yey' ku jirta xayawaanka laakiin sababtoo ah xayawaannada gardarrada ah ayaa la soo saaray si ay u sii kobciyaan dhaqanka liita ee faraca.
Deganaansho la'aantu maahan inay sabab u tahay taranka 'gardarrada' wolfdogs ee dhahda. Inta badan waqtiyadu waxay dhacaan waa ciyaar-xumo dabeecadeed ee eyda loo doortay inay ka gudbaan yeey. Tusaale ahaan qaar ka mid ah khadadka shaqada ee Shepherd Jarmal waxay leeyihiin hiddo-wadaha hiddo-wadaha ah ee gardarada, ilaalinta iyo / ama caddaynta. Taasi waa sababta, tababbarka saxda ah, ay u sameeyaan boolis heer sare ah ama eeyaha difaaca. Haddii aad ku dhex qasto dabeecaddan yey xishood leh, dabeecad qalloocan, yeeyda ayaa xasillooni darro badan ka dhalan doonta khilaafka gudaha ee ay abuureen labadan hiddo-wadaha iska soo horjeedda. Mararka qaarkood yeeyda ayaa dib uga laaban doonta mararka qaarkoodna wey kacsan tahay, had iyo jeerna lama saadaalin karo. Hal xaaladood ayaa laga yaabaa in yeydu aysan wax falcelin ah ka samayn. Kadib xaalad aad u eg oo dambe, yeeyda ayaa laga yaabaa inay isku daydo inay dagaal sameyso. Ma awoodi doontid inaad ku saadaaliso dhaqanka mustaqbalka dabeecadihi hore. Jaanqaadka 'looma tababari karo iyaga'. 'Qabsashada' aan laga fiirsan ee u dhexeeya xishoodka iyo gardarrada ayaa suurtagal noqon doonta oo aan la sii saadaalin karin iyada oo aan loo eegin 'waxa' yeyda, sababtoo ah nooca ay ku dhex qasnayd. Tani waa cawaaqib xumo nasiib darro ah oo ku timaadda taranka aan la wargelin, taxaddar la'aan. Yeyda ayaa ku bixisa qiimaha nolosheeda markii lagu calaamadiyo 'wax xun'.
Celcelis ahaan: 26-34 inji lab & dheddig oo isleeg. Waxyaabaha hoose ee yeydu waxay u muuqdaan inay yihiin dhinaca gaaban, halka waxyaabaha ka sarreeya ay u janjeeraan dhinaca dheer.
Celceliska culeyska Wolfdogs wuxuu ka socdaa 60 illaa 120 rodol, laakiin helitaanka intaas sare waa wax aan caadi ahayn oo wuxuu u eg yahay labka dharka jiilaalka. Sheegashooyinka wax intaas ka badan shaki kuma jiro war been abuur ah ama buun buunin.
Guud ahaan yeydu waa xayawaan si aan caadi ahayn u caafimaad qaba. Ma lahan wax dhibaato caafimaad oo hidde ahaan caadi ah sida hip dysplasia, iwm, laakiin dabcan way dhibsan karaan cudurada caadiga ah ee kaneecada sida boodada, shilinta, gooryaha wadnaha (haddii aan lagu daaweynin kahortaga) cudurada kaneecada sida parvovirus, distemper, rabies, iwm oo ah in laga tallaalo sida eey kasta oo kale iyo cudurro kale sida qufaca xinjirowga, coccidia, giardia, iwm. Xusuusnow in dhakhaatiirta xoolaha qaarkood aysan daaweyn doonin yeeyda bartamaha iyo / ama waxyaabaha sare leh, markaa hubi inaad wacdo rugaha caafimaadka ee deegaankaaga si aad u hubiso intaadan korsan.
Tani waa halka ay wax aad qaali ugu noqon karaan. Meelaha Low iyo kuwa badan ayaa ku noolaan kara deyr caadi ah. Si kastaba ha noqotee, waxyaabaha ku jira sare waxay badanaa u baahan yihiin 6-8 ft ood, ku tiirsanaan, diguard, iyo hotwire si looga hortago baxsashada. Xayawaan caajis ahi waa xayawaan aan faraxsanayn waxayna u badan tahay inuu isku dayo inuu meeraysto. Waa inaanay ku oollin gidaarka gudaha xayndaabku oo cagaha qaban kara, xayndaabku waa inuu noqdaa alwaax lo 'ama silsilad isku xidha silsilado culus (wolfdogs ayaa lagu yaqaanay inay wax ku qaniinto silsiladda daciifka ah), ama xitaa daaraha vinyl. Qoryaha laguma talinayo maxaa yeelay aakhirka way duudduubtaa waxayna leedahay khatar baxsad ah markay bilawdo inay qudhmo / daciifto. Mids iyo Mawduucyada Sare ayaa ah kuwa ugu badan ee isku dayaya inay ka baxsadaan dhererka dhererku had iyo jeer kuma filna maadaama yeydu ay si toos ah uga bixi karto silsiladda isku xidhka siligga / xayndaabka lo'da. Ilaa xayawaankaagu ka gaboobayo run ahaantii ma ogaan doontid haddii ay noqon doonaan khatar baxsad ah.
Waxaa jira waxyaabo sare oo sahal ah oo si fudud loo xallin karo iyo waxyaabo hoose oo ah fanaaniinta baxsadka ah. Waxay kaliya kuxirantahay sida xun ee xayawaankaagu u doonayo banaanka, hadii ay caajisaan, hadii ay jiraan wax dhinaca kale ee xayndaabka oo runtii iyaga xiise u leh, iwm.
Fiiro gaar ah: Xayndaabka alwaaxda iyo vinylku waxay halis ugu jiraan in la kala calaliyo.
Xayndaab weyn oo ah (MAYA xayndaabka korontada / dhulka hoostiisa) korantada ayaa ku habboon meesha isaga / iyadu ay ku leeyihiin qol ku filan oo ay ku ordaan oo ku ciyaaraan. Wolfdogs sidoo kale waa xayawaan aad u bulsheed waana inay marwalba yeeshaan ugu yaraan hal wehel oo kale.
Wolfdogs dhammaan heerarka mawduucyadu waxay u baahan yihiin kicin badan oo maskaxeed iyo sidoo kale jimicsi jireed. Qaar ka mid ah tan ayaa lagu sameyn karaa xayndaabkooda iyaga oo la ciyaaraya ciyaaro. Wolfdogs waxay u baahan tahay jimicsi xad dhaaf ah. 'Maalin nasasho' waa ugu yaraan 3 saacadood. Maalin caadi ah waa inay ahaataa ugu yaraan 5 saacadood oo firfircoon oo socod ah, tababar goobid ah, oo jiidaya xayndaabyada / gawaarida. Badankood waxay awoodaan in lagu dul maro xadhig sida eey kasta oo kale, waana in lagu socdaa maalin kasta, sida ugu habboon. Waxyaabaha sarreeya ayaa mararka qaarkood cabsi gelin kara xaaladaha socodka qaarkood waxayna ku fiicnaan karaan meelaha lugaynta miyiga ah iyo xaafadaha magaalada. Laguguma talin inaad yeydo ku yeelato deegaan u eg magaalada. Meel lagu xanaaneeyo wolfdog waa inay ahaato mid aad u weyn (uguyaraan 20x20 '1-2 xayawaan) waana inay lahaato meelo ay ku dhuuntaan oo ay gabaad ka dhigtaan, walxaha ay fuulaan (uma dhawa xayndaabka!), Waxyaabaha ay caruurtu ku ciyaaraan, iwm. kobcinta ayaa fure u ah in yeeydu ku noolaato farxad iyo caafimaad.
Xusuusin: Yeyda waa in lagu socdaa laba xadhig. Mid ku xidhan silsilad ama suumanka kan kalena ku siibasho xadhig ah. Xadhiga ku xidhan siligga / xarkaha waa inuu noqdaa xadhigga ugu weyn, hoggaanka siibku waa inuu u dhaqmo sidii keyd ahaan haddii wax xooluhu kiciyaan, maxaa yeelay haddii ay ka siibtaan suumankooda / collar iyagoo argagaxa waxay u badan tahay inay bool off taas oo iyaga u gelinaysa khatar inay lumaan, ay ku dhacdo xakameynta xayawaanka, uu ku dhaco gaari, iwm.
poodle caadi ah iyo iskudhaf celis dahab ah
Qiyaastii 13-16 sano
Qiyaastii 4-6 Ey
Wolfdogs waxay leedahay jaakad laba jibbaaran taas oo noqota mid aad u qaro badan bilaha jiilaalka. Tani waxay u oggolaaneysaa iyaga inay ku raaxaystaan ​​dibadda sida eheladooda duurjoogta ah ay yihiin. Waxay 'afuufayaan' jubbadda jiilaalka (waxay luminayaan dhammaan jaakadda hoosteeda) guga xilliganna waxaa loo baahan yahay qurxin badan. Burushyada qaabka loo yaqaan 'Rake' ayaa aad waxtar ugu leh tan. Haddii kale cadayashada guud labadii toddobaadba mar way ku filan tahay. Si dhow ula soco dhogorta iyo dhogorta dabada dhagaha gadaashiisa maaddaama aagaggaasi ay u badan tahay inay isku dhex yaacaan.
Wolfdogs waxay ku timid marinka yeeyga saafiga ah ee lagu beero beeraha dhogorta leh eeyo u eg oo la mid ah (ie: Malamute, GSD, Husky-types). Weligood laguma abuurin iyagoo ka tagaya eey dumar ah oo ku xidhan meel ka baxsan dhulka yeyda, ama iyagoo adeegsanaya yeey 'den tuugo' ka dhacday. Inta ugu badan eeyaha ayaa loo yaqaan 'wolfdog x wolfdog', laakiin qaar ayaa wali ku dhasha 'wolfdog x yey' ama kuwa hoose ee 'wolfdog / wolf x dog'. Sida caadiga ah suulka, tirada sare ee faylka (ama F #), ayay fududahay in la maareeyo xayawaanka. Tusaale ahaan, cunug ka yimid yey saafi ah iyo yeyda (ama eyga) weheshiga waxaa loogu yeeri doonaa F1. Haddii xayawaankaas mar dambe loo hiddeeyo xayawaan kale oo F1 ah, cunugyada ka dhasha waxay noqonayaan F2, iyo wixii la mid ah. Tirada ayaa muujineysa inta qarni ka fog yey saafi ah oo xayawaan ah.
Wolfdogs waa eeyo noocyo isku dhafan ah sidaas darteedna looma diiwaangelin karo KOOXDA xayawaanka sumcadda leh, sida Naadiga Kennelka Mareykanka. Waxaa jira qaar ka mid ah diiwaannada internetka oo ku siin doona waraaqo iyaga lacag ah, laakiin kuwani waa khiyaanooyinka internetka - buyer beware. Waxaa jira kooxo wolfdog fanciers kooxo / naadiyo, ugu caansan waa Florida Lupine Association.
UCA - Ururka Canine United
Kyra, wolfdog bartamihii da'da ee 3 sano jir
Kabtan wolfdog wax ku ool ah.
Shango waa wolfdog waxyaabo badan ka kooban. Wuxuu sameeyaa wacyigalin iyo waxbarasho wuxuuna safiir u yahay isirkiisa.
'Kyla the Wolfdog oo 7 jir ah. Iyadu waa 44% Timberwolf , 25% Yeyda Tundra, 25% American Akita iyo 6% Eyga Adhijirka ah ee Jarmalka . Waan iibsaday oo waxaan keenay gurigeeda iyadoo 4 toddobaad jir ah. Aad bay u lahayd isdhexgal hore , tababarka iyo guri dumis . Iyadu waa mid aad u bulsheed, ilaaliya hanjabaadaha dhabta ah, waxay ku fiican tahay xirmooyinka. Iyadu si fiican uma qabato yaryar, gardarro badan, eeyaha qeylinaya . Waxay ahayd eeygii ugu adkaa ee aan abid abid u leeyahay tababbarka iyo wax ka beddelka akhlaaqda, haddana kan ugu wada abaalmarinta badan! Iyadu waa wehelkayga dhabta ah iyo ETA. Waxay ku dhex leedahay dhegaha iyo dabada Akita, maadaama ay dabada u duubto sida Spitz taranka iyo dhegaha ayaa ka weyn nooca yeyda cirro leh. Aad bay u ugaarsataa.
'Tala wolfdog (Gray Wolf / Malamute / GSD). Waxay muujineysaa jaakad waxyar ka dheer Yeyda (hiddo-wadeyaasha Malamute) iyo in badan oo Jarmal Shepherd ah oo midabeynaya kuwaas oo hiddo-wadaha eyga ah, laakiin weli ma leh 'joogsi' (barta ay muusku wejiga kaga kulmaan), waxay leedahay midab aad u wanaagsan oo isku dhafan (yacni: majiro maaskaro hareeraysan oo leh kala xadayn xoog leh), indhaheeda ayaa loo dhigay xagal wajiga ah (iyo haa, waa huruud - laakiin waxaa jira * eyda oo leh indho jaalle sidoo kale. Indho buluug ah kuma dhici doonaan yeyda eey ka kooban waxyaabo hooseeya. Ciddiyaheeda si aan caadi ahayn u dhumuc weyn yihiin madowna waxay u egyihiin ciddiyo. Waxay leedahay lugaha dhaadheer, laab aad u cidhiidhi ah, dhagaha yaryar ee aadka u cadcad, dabo madow oo madow, lugaha gadaal oo sacab ah, cago aad u tiro badan, aadna u dheer (yeydu waxay kudhowaad tahay 26'-34 garabka). Kuwaasi oo dhami waa sifooyin jireed oo yey ah. Iyadu ma xishooto sababtoo ah bulsheed xad dhaaf ah laga soo bilaabo da'da hore, laakiin qaar badan ayaa xishood badan. Waxaan ku soo daray sawirada labbiska jiilaalka iyo jaakad xagaaga isbarbar dhig ah. Wolfdogs waxay caan ku tahay farshaxannimada baxsadka waxayna si gaar ah u burburin kartaa guri ama gaari. Badanaa si fiican uma safraan gabi ahaanba. Waxay u baahan yihiin xakameyn bannaanka ah oo la mid ah beerta xayawaannada ah isla markaana kuma tiirsanaan karaan wax aan ahayn hilib ceyriin ama kibble tayo sare leh oo aan hadhuudh lahayn. Waxay sidoo kale inta badan ku nool yihiin qiyaastii 16 + sano jir, markaa fadlan ka fiirso waxyaalahan oo dhan ka hor inta aanad raadinin abuure. '
Tala wolfdog (Gray Wolf / Malamute / GSD) oo ah cunug yar oo usbuuc 4 jir ah.
'Lucian waa Mawduucayga Dhexe ee Wolfdog. Way ka fududdahay maarayntiisa marka loo eego xayawaan sare, laakiin kuwa aan khibrad hore u lahayn wolfdog wuxuu la kulmi lahaa caqabad. Iskaa wax u qabso iskaa wax u qabso ah, yey, ama la kulanta qof leh xayawaankan midkood waxay kaa caawin kartaa inaad qof siiso khibrad. Waxaan la shaqeeyay Mawduuc Sare Wolfdogs muddo dhowr sano ah ka hor inta aanan dareemin inaan si buuxda ugu diyaar garoobay inaan Lucian keeno gurigeyga. Lahaanshaha Wolfdog maahan in si fudud loo qaato! '
Varg waji madow-wajiga sare ee mawduuca wolfdog.
Lakota waa wolfdog dhexdhexaad ah oo lagu muujiyey halkan 9 jir.
'Ayashi waa wolfdog si wanaagsan loo soo saaray, oo ka kooban yeeyda Winddancer ee Ohio. waa 2 sano jir walina waa ciyaareysaa waxayna u dhaqantaa sida eey. Iyadu way ku xoog badnaan kartaa yeyda kale mararka qaarkood, laakiin iyadu sidoo kale way is rogi doontaa oo waxay ku tusi doontaa caloosheeda daqiiqadda ay ku aragto. waxay jeceshahay dadka badankeeda waxayna jeceshahay biyaha. u fiirso indhaheeda jilicsan, dhagaha si fiican u xiiraya, lugaha dhaadheer, cagaha waaweyn, jaakad isku dhafan, iyo dabo laalaada. dhammaan waxyaabaha iyada ka dhigaya gabadhayda xiisaha badan. waan jeclahay iyada waana ku faraxsanahay inaan haysto.
Eeg tusaalooyin badan oo Wolfdog ah
Wolfdog Sawirada 1
Liiska eyda eyda ah ee loo yaqaan 'Wolf Wolf Mix Breed Dogs'
Liistada Eyga Isku-dhafka eeyaha Isku-dhafan
Yeey: Sawirada Guryaha La Uruurin Karo
xajmiga santuuqa caadiga ah
schnauzer yaryar oo lagu qasay chihuahua
schipperke mix puppy puppy iib ah